‘अबको निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्छ’
११४६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ श्रावण ०९ , १०:३० बजे
– राजेन्द्र रावल
(केन्द्रीय स्कूल विभाग सदस्य)
गत असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले मुलुकभर मात्र नभई ७ नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेशमा एमाले पहिलो भएपछि साउन ७ गते एमालेले धनगढीमा ‘केक’ काटेर खुसीयाली मनाएको छ ।
एमालेले कञ्चनपुरको सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिका पनि जित हासिल गरेपछि एमाले हौसिएको छ । समग्र नतिजालाई एमाले कञ्चनपुरले कसरी विश्लेषण गरेको छ ? आगामी दिनमा हुने निर्वाचनको रणनीति कस्तो छ ? यी र यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पत्रकार जनकसिंह विष्टले केन्द्रीय स्कूल विभागका सदस्य राजेन्द्र रावलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निर्वाचनपछि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
– एमालेको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न अभियान नै चलाइयो । निर्वाचनमा पनि हामी मुलुकको पहिलो पार्टी बन्यौं । त्यति मात्र होइन, ७ नम्बर प्रदेशमा पनि हामी पहिलो बनेका छौं । सम्पूर्ण मतदाताप्रति एमाले धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
निर्वाचनपछि पनि हामी जनताको घरदैलोमा छौं । हामी राष्ट्रियता, स्वाभिमान र समृद्धिको अभियानमा सरिक भएका छौं । न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति आभार प्रकट गर्ने काममा लागिपरेका छौं । यो राजनीतिक अभियानमा प्रदेशसभा चुनाव हुँदैछ । देशमा संसदको निर्वाचनको तयारी हुँदैछ । तर, यसबीचमा हामी संगठनात्मक सुदृढीकरण कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा अगाडि बढाउँदै छौं । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुटेकालाई दर्ता गराउन आह्वान गर्दछौं ।
स्थानीय तहको चुनावको परिणाममा एमालेको विश्लेषण के छ ?
– स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको विजयी र परिणाम राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा नेपाली जनता एवम् सुदूरपश्चिमको भविष्य हो । यसैगरी, संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि अब नेपालको परिकल्पना अवधारणाको चिन्तनको विषय हो । एमालेको विजय आमनेपाली मजदुर, कृषक, सर्वहारा वर्गको र खासगरी यस क्षेत्रका बुद्धिजीविको जितको रुपमा लिएका छौं । देशमा स्थायित्वमा विजय हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम राख्ने जनताको विजयको रुपमा लिएका छौं ।
कञ्चनपुरमा एमालेले जितेको परिणाम अपेक्षाकृत हो र ?
– कञ्चनपुरमा एमालेले मात्र जितेको छैन । नेपाली राष्ट्रियता, स्वाभिमान, नेपाली जनता साथसाथै एमालेले पनि जितेको हो । हाम्रो अपेक्षा कञ्चनपुरका ९ वटै स्थानीय तहमा जित्छौं नै भन्ने थियो । त्यसका लागि पार्टीले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान पनि चलाएको थियो ।
एमाले राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम राख्नमा सधैं अगाडि बढिरहन्छ । पार्टीले कार्यकर्ता बीचको सुदृढता कायम राख्न एकता अभियान चलाएको थियो । यसबाट पनि हामीले के विश्वास लिएका थियौं भने एमाले कञ्चनपुरका ९ वटै तहमा जित्छ । तर, हाम्रा प्रतिपक्ष सत्ता गठबन्धन आन्तरिक तालमेल पनि देख्यौं । यो सिद्धान्तको तालमेलभन्दा पनि स्वार्थको तालमेल हो भन्ने जस्तो लाग्छ ।
त्यस कारणले पनि केही ठाउँमा पदाधिकारी पराजय भोग्नुपर्ने स्थिति आएको हो । अरु पार्टीका कारण विपरित धु्रव कारणले पनि कुनै ठाउँमा अलि कमजोर देखियौं । त्यसकारणले ती ठाउँमा उत्साहजनक नै आएको थियो ।पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणामबाट पनि हामी जित्छौं भन्नेमा ढुक्क थियौं । र, दोस्रो चरणमा पनि हामी नै पहिलो भयौं । सत्ता साझेदर पार्टीले एमालेविरुद्ध षड्यन्त्र नगरेका होइनन् तर हामी पहिलो बन्यौं ।
अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको असर हो कि ?
– एमालेभित्र कुनै प्रकारको गुटबन्दी छैन । हाम्रो नेतृत्व नै एकीकृत भएर आइसकेपछि राष्ट्रिय, स्वाधिनता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर नेतृत्व अझ एकीकृत भएको देखिन्छ । सबै नेताले केन्द्रदेखि पूरै राष्ट्रसम्ममा विमतीलाई सधै एउटा थानकोमा सुताएर एकीकृत भएर आएका छौं भन्ने प्रण र वचनवद्धताले हामी यहाँ पुगेका हौं । त्यसकारण एमालेमा कुनै गुटबन्दी छैन । मत परिणाम हेर्नुहोस् मेयर र उपमेयरको परिणाम हेर्दा मातृसत्ता पनि निकै विजय प्राप्त गरेको छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्तमै विजयी हुनुभएको मेयर सुरेन्द्र विष्टभन्दा उपमेयरमा माया पन्तको ५ मत बढी छ । बिडम्बना के भो भने अरु पक्षले मतको खरिद गर्ने र गठबन्धन गर्दाको विषय समयमै बाहिर आउन सकेन । समयमै थाहा पाएको भए हाम्रो पक्षमा लविङ गर्न सकिन्थ्यो । अन्तिम क्षणमा आएर उनीहरूले आफ्नो पक्षमा आएको मत पनि अरुको पक्षमा हाल्ने क्रियाकलाप अदृष्य ढंगबाट गरे । एमाले संगठित, विचारधारात्मक, सैद्धान्तिक रुपले अगाडि बढेको छ । एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी छैन । हामी एकताबद्ध छौं ।
जहाँसम्म कञ्चनपुरमा गुटबन्दीको विषय छ । यो निराधार कुरा हो । वैचारिक सवाल होस् वा नीतिगत सवालमा एकता छ । सैद्धान्तिक एकताको सवालमा जनताको बहुदल जनवाद बाहेकको कुनै मान्छे आज नेकपा एमालेभित्र छैनन् । जसले जनवाद बहिष्कार गर्छ त्यो व्यक्ति एमालेमा छैन । रणनीति र कार्यनीतिका सवालमा पनि समस्या छैन । अनि महाधिवेशनमा कसलाई नेता बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त भोट अधिकारको कुरा एक दिनको त हो । त्यहाँ पनि हामीले नीति नियमको कुरामा त्यति विमती देखेनौं । सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई कसैले गुट देख्छ भने आँखामा लगाएको ती चस्मा खोलिदिए हुन्छ ।
कञ्चनपुरमा एमालेले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ ?
– एमाले जनमतको आधारमा कहिले पनि पछाडि रहेन । कञ्चनपुरमा पनि सधैं पहिलो शक्तिको रुपमा रहेको छ । किनभने हामी जनताका समस्या, मुद्दा, सवालसँग जोडिएका छौं । लामो समयसम्म अध्ययन गरेर कञ्चनपुरको विषयमा अगाडि बढिरहेका छौं । ‘महाकाली साझा हो । पानी आधाआधा हो । गिरिजा बाबु ध्यान दिऊ घाडीघाँचबाट नहर ल्याऊ’ अभियान चलाएको नै किन नहोस् । प्रतिगमनकाविरुद्ध उठ्ने किन नहोस् । अन्य दलको गैरजिम्मेवार भूमिकाविरुद्ध पनि हामी सधैं अगाडि रह्यौं । अबको चुनौति राष्ट्रलाई स्वाधिनताको रुपमा अगाडि बढाउने हो ।
क्षेत्रीय विखण्डनबाट कसरी मुलुकलाई मुक्त राख्ने भन्नेमा हाम्रो चिन्तन र लडाइँ हो । त्यसका लागि सजग भएर हामीले इतिहास, कला, परम्परागत संस्कृति जोगाएर विकासमा जनताको भावनालाई समेट्दै नयाँ आयाम कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषय मुख्य हो । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकालाई कसरी पारवहन नाकाको रुपमा परिणत गर्न पुल बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो एजेण्डा हो ।
कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेका छौं । यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चुनौति रहेको छ । यहाँको सडक सञ्जाललाई कसरी जोड्ने भन्ने चुनौती छ । कञ्चनपुर जिल्ला अहिले नयाँ सञ्चार सुविधाको खाँचो छ । नयाँनयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । भोलिका दिनमा प्रविधिमैत्री कञ्चनपुर, सूचना प्रविधि, सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवालमा हामीले नयाँ चेतनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।
कञ्चनपुरको भौतिक पूर्वाधारका योजनाजस्तै महाकाली तेस्रो आयोजना, कृषिको आधूनिकरणसँगै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालाई कसरी समृद्ध बनाउने, कस्तो शिक्षा नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने विषय एजेण्डा हुन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सबाल पनि विकासका एजेण्डा हुन् ।
जिल्लामा यातायात गुरुयोजना, ग्रीन सिटी, मानव विकास सूचकाङ्कको विषय, यहाँको गरीबीको नक्साङ्कनको सवाल छ । नगरपालिकाले स्रोत र संशाधन कसरी जुटाउने, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्ने चुनौती छ । यी तमाम चुनौतीसँग पौठेजोेरी खेल्नका लागि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि लाग्ने छ । त्यति मात्र होइन, जनताका मुद्दा उठान गर्ने सवालमा एमाले सबै पक्षसँग मिलेर जाने छ ।
जिल्लामा पार्टी संगठन सुधारको आवश्यकता छ कि छैन ?
– निश्चय नै पार्टी संगठनमा सुधार चाहिन्छ । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने उखान छ, माघ फेरि–फेरि आउँछ । त्यसकारण सिरक डसनालाई पनि थन्क्याउनुपर्छ । नवीन संरचना अनुरुप पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । निर्वाचनको दौरानमा कतिपय व्यक्ति पार्र्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, एकथरि निर्वाचित निकायमा पार्टी कार्यकर्ताको पंक्ति एकातिर गएका छन् भने अर्कोतिर नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । अब पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुको निमित्त संगठनमा प्रभावकारी व्यक्तिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरत छ । पार्टीमा नयाँ आएका व्यक्तिको योग्ताअनुसार काम दिने, कञ्चनपुर जिल्लाका जनताको हितका लागि उनीहरूको योग्यताको उपयोग गर्नुपर्ने छ ।
बहुआयामिक क्षमताका व्यक्ति अहिले पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर टिका लगाउने प्रथा मात्र होइन, उनीहरूको भूमिका, काम तथा क्रियाकलापलाई कहाँ संस्थागत गर्ने ? संरचनात्मक रुपमा पनि रुपान्तरित संरचनाजस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र कमिटी, राज्यको ढाँचागत रुपमा पनि पार्टी कमिटीको रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौति रहेको छ । यी तमाम कामलाई लिएर हाम्रो संगठनको सुदृढीकरणमा समय दिन्छौं । पार्टीमा अहिले स्कूलिङको खाँचो पनि देखिएको छ । जनताको हितलाई मध्यनजर राखेर कस्तो खालको योजना बनाउनुपर्छ, यसकारण संगठनभित्र सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।
जितको श्रेय कसलाई जान्छ ?
– एमाले पहिलो पार्टीको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । तर, यसले हामीले दम्भ गर्नुपर्ने जरुरी छैन । हामीले जबसम्म जनताका मुद्दालाई सुखी र खुसी नेपाली, समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सकार पार्न सक्दैनौं पार्टी पहिलो भयो भनेर दम्भ गर्नुपर्ने जरुरी छैन । अबको निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्छ । किनभने, देश विखण्डनको शक्ति जित्नेवाला छैन । किनकि यो नेपाली राष्ट्र जागेको हो । स्वाभिमान जागेको हो । मधेसमा बस्ने नेपाली स्वाभिमान बोकेका नेपाली त्यहाँ बसेका छन् ।
जसले नेपाललाई बाहिरबाट सञ्चालन गराउने, देब्रे र दाहिनेबाट सञ्चालन गराउने मनस्थिति बोकेका छन् । त्यो मानसिकतालाई पराजित गर्ने सवालमा एमालेको जनमतले देखाएको छ । तर, मूल कुरा के हो भने हामी जितेको तब ठहरिने छ । जब हामी गरीबीलाई जित्ने छौं । जब हामी दीगो विकासको अवधारण हामी जित्ने छौं । आज जनताले विदेशमा अदक्ष कामदारको रुपमा काम गर्ने होइन ।
जब नेपाली भूमिमा हाम्रा युवाले काम गर्ने छन् । नेपालको सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गरेर राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत गरेर नेपाललाई अगाडि बढाएका हुने छौं । त्यतिबेला हामी जितेका हुने छौं । हामी हाम्रो देशको स्वाधिनता, समृद्धि, नागरिकको हक र हितको निमित्त निरन्तर रुपमा अघि बढ्ने वाचासहित आफूलाई अगाडि बढाउने छौं ।
सीमामा गोविन्द गौतमको हत्या हुने छैन । हाम्रो स्वाभिमानको रक्षा हामी गर्न सक्ने छौं । राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनेछ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको नेपालीको रुपमा बाच्न पाउने छौं । तब हामी जित्ने छौं । यसकारण एमाले जितको उन्माद लिएर होइन, हामीले आत्तिनु पनि छैन, मात्तिनु पनि छैन । जनताका जिउधनका सुरक्षा, जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रियताका सवाललाई सँगसँगै लिएर हामी बढ्ने छौं ।